गुगल एनालिटिक्स व्यवहार रिपोर्ट: तपाईंले महसुस भन्दा अधिक उपयोगी! | Martech Zone
गुगल एनालिटिक्सले हामीलाई हाम्रो वेब प्रदर्शन सुधार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण डाटाको एक समूहको साथ प्रदान गर्दछ। दुर्भाग्यवस, हामीसँग यो डेटाको अध्ययन गर्न र यसलाई उपयोगी चीजमा परिवर्तन गर्न हामीसँग सँधै अतिरिक्त समय हुँदैन। हामी मध्ये धेरैलाई राम्रो वेबसाइटहरूको विकासको लागि सान्दर्भिक डेटा जाँच गर्न सजिलो र द्रुत तरिका चाहिन्छ। त्यो ठीक कहाँ छ गुगल एनालिटिक्स व्यवहार रिपोर्टहरू आउँदछन्। यी ब्यवहार रिपोर्टको मद्दतले, तपाइँको सामग्रीले कस्तो प्रदर्शन गरिरहेको छ र अनलाईन आगन्तुकहरूले अवतरण पृष्ठ छोडे पछि के कस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन् भनेर छिटो निर्धारण गर्न यो सरल हुन्छ।
गुगल एनालिटिक्स व्यवहार रिपोर्टहरू के हुन्?
व्यवहार रिपोर्ट अनुभाग सजिलैसँग Google एनालिटिक्सको बाँया साइडबार मेनू प्रयोग गरेर पहुँचयोग्य छ। यो प्रकार्यले तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइटको आगन्तुकहरूको सामान्य ब्यवहार विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईको विश्लेषण गर्नको लागि तपाई कुञ्जीशब्दहरू, पृष्ठहरू, र स्रोतहरूलाई अलग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ व्यवहार रिपोर्टमा महत्वपूर्ण जानकारी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मुद्दाहरू सुल्झाउने र तपाइँको साइटको प्रदर्शन सुधार गर्ने व्यावहारिक तरिकाहरू विकास गर्न। व्यवहार रिपोर्ट अन्तर्गत तपाईले के पाउन सक्नुहुन्छ भन्नेमा नजीक हेरौं:
जस्तो यसको नामले सुझाव दिन्छ, अवलोकन खण्डले तपाईंलाई तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक नेभिगेसनको ठूलो चित्र विचार दिन्छ। यहाँ तपाईं कुल पृष्ठ दृश्य, अद्वितीय पृष्ठ दृश्य, औसत दृश्य समय, आदि मा जानकारी पाउनुहुनेछ।
यो सेक्सनले तपाईंलाई निश्चित पृष्ठ वा स्क्रिनमा व्यय गर्नेहरूको समयको औसत रकमको बारेमा पनि डाटा दिन्छ। तपाईं आफ्नो बाउन्स रेट र बाहिर निस्कने प्रतिशत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, जसले तपाईंलाई तपाईंको वेबसाइटको प्रयोगकर्ता व्यवहार राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ।
[बक्स प्रकार = "नोट" align = "aligncenter" वर्ग = "" चौड़ाई = "% ०%"]सस्ता: पृष्ठ दृश्यहरू, बाउन्स रेट, एक्जिट दर, औसत सत्र अवधि, र एड्सेन्स राजस्व जस्ता प्यारामिटरहरूबाट तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूको व्यवहारमा कुञ्जी अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नुहोस्। गत महिनाको तुलनामा, तपाईले निश्चित अवधिको अवधिमा आफ्ना प्रयासहरूको मूल्याate्कन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रयोगकर्ता ब्यवहार नयाँ सामग्री थपेर, नयाँ उत्पादनहरू बेच्दै, वा कुनै अन्य साइट परिवर्तन गरेर सुधार भएको छ कि हेर्नुहोस्। [/ बक्स]
व्यवहार फ्लो रिपोर्ट
यो व्यवहार फ्लो रिपोर्ट तपाइँको वेबसाइटमा तपाइँको आगन्तुकले कुन बाटोहरू लैजान्छन् तपाइँलाई एक भित्रि हेराई दिन्छ। यो खण्डले तिनीहरू हेर्ने पहिलो पृष्ठ र अन्तिममा उनीहरूले भ्रमण गरेको बारेमा विवरणहरू प्रदान गर्दछ। यहाँबाट, तपाई सेक्सनहरू वा सामग्री फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन सबैभन्दा बढी सment्लग्नता र कमसेकम प्राप्त गर्दछ।
व्यवहार रिपोर्टको यस खण्डले आगन्तुकहरू तपाइँको वेबसाइटमा प्रत्येक पृष्ठसँग कसरी अन्तर्क्रिया गरिरहेका छन् भनेर विस्तृत डेटा प्रदान गर्दछ।
सबै पृष्ठहरू - सबै पृष्ठ रिपोर्टहरूले तपाईंलाई शीर्ष प्रदर्शन सामग्री र प्रत्येक पृष्ठको लागि औसत राजस्व हेर्न दिन्छ। तपाईं ट्राफिक, पृष्ठ दृश्य, औसत दृश्य समय, बाउन्स दर, अद्वितीय पृष्ठ दृश्य, प्रविष्टिहरू, पृष्ठ मूल्य, र निकास प्रतिशतको आधारमा तपाईंको वेबसाइटमा शीर्ष पृष्ठहरूको प्रदर्शन प्राप्त गर्नुहुनेछ।
ल्यान्डिङ पृष्ठहरू - ल्यान्डि Pages पृष्ठहरूको रिपोर्टले कसरी आगन्तुकहरूले तपाइँको वेबसाइटमा प्रवेश गरिरहेको छ भनेर जानकारी देखाउँदछ। तपाईले ठ्याक्कै भन्न सक्नुहुनेछ जुन शीर्ष पृष्ठहरू हुन् जहाँ आगन्तुकहरू पहिले अवतरण गर्दछन्। डाटाले तपाईंलाई पृष्ठहरू निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ जसको माध्यमबाट तपाईं सबैभन्दा धेरै रूपान्तरण र सीसा उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ।
[बक्स प्रकार = "नोट" align = "aligncenter" वर्ग = "" चौड़ाई = "% ०%"]सस्ता: तपाईले छविमा देख्नु भए अनुसार कुल सत्र session 67% र नयाँ प्रयोगकर्ताले 81.4१..XNUMX% ले वृद्धि गरेको छ। यो धेरै राम्रो छ, जबकि ट्राफिकले औसत सत्र अवधिलाई अवरोध पुर्‍यायो। यस रिपोर्टको साथ, हामीले प्रयोगकर्ताहरूको नेभिगेसनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। हुनसक्छ तिनीहरू सजिलैसँग नेभिगेट गर्न सक्षम छैनन् किनकि तपाईंको साइटले नराम्रो प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्दछ। यी व्यवहार रिपोर्टको साथ, तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि मालिकले प्रयोगकर्ता संलग्नतामा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। यसले बाउन्स रेट घटाउँछ र औसत सत्र अवधि बढाउँदछ। [/ बक्स]
सामग्री ड्रिलडाउन - यदि तपाईंसँग तपाईंको वेबसाइटमा कुनै उपफोल्डरहरू छन् भने, तपाईं शीर्ष फोल्डरहरू पत्ता लगाउन सामग्री ड्रिलडाउन रिपोर्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं प्रत्येक फोल्डर भित्र शीर्ष प्रदर्शन सामग्री पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको साइटको पृष्ठहरूमा सर्वश्रेष्ठ सामग्री सेक्सनहरू हेर्न दिन्छ।
पृष्ठहरू बन्द गर्नुहोस् - प्रस्थान पृष्ठ रिपोर्ट अन्तर्गत, तपाईं कुन निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ पृष्ठ प्रयोगकर्ताहरूले अन्तिम भ्रमण गर्दछन् तपाइँको साइट छोड्नु अघि यी सामान्य निकास पृष्ठहरूलाई सुधार गर्न मस्तिष्कमा राख्ने रणनीतिको लागि उपयोगी छ। यो सिफारिश गरिएको छ कि तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मा अन्य पृष्ठहरु मा लिंक जोड्नुहोस् ताकि आगन्तुकहरु लामो रहन।
व्यवहार रिपोर्टको यो खण्ड महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले तपाईंलाई ती क्षेत्रहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ जहाँ तपाईं आफ्नो वेबसाइट अनुकूलित गर्न आवश्यक पर्दछ। तपाईं को बारे मा एक स्पष्ट विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ पृष्ठ गति र यसले कसरी प्रयोगकर्ता व्यवहारमा असर गर्छ। साथै, रिपोर्टले थाहा गर्दछ औसत लोड समय बिभिन्न देशहरू र बिभिन्न इन्टरनेट ब्राउजरहरूमा फरक छ।
साइट गति अवलोकन - साइट गति अवलोकन रिपोर्टमा, तपाईंले प्रत्येक पृष्ठ औसतमा कति लोड हुन्छ भनेर छोटो सारांश देख्नुहुनेछ। यो औसत पृष्ठ लोड समय, डोमेन लुकअप समय, पुनर्निर्देशन समय, पृष्ठ डाउनलोड समय, सर्भर जडान समय, र सर्भर प्रतिक्रिया समय सहित विविध मेट्रिक्स, प्रदर्शन गर्दछ। यी संख्याहरूले तपाईंलाई कसरी उन्नत पृष्ठ डाउनलोड समय र पृष्ठ लोड समयको लागि तपाईंको सामग्री अप्टिमाइज गर्न सक्दछन्। उदाहरण को लागी, छवि आकार र प्लग-इन को संख्या लाई कम गर्न पृष्ठ लोड समय सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
पृष्ठ समयहरू - पृष्ठ समय रिपोर्ट प्रयोग गरेर, तपाईं तपाईंको सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको पृष्ठहरूको लागि औसत लोडिंग समय फेला पार्न सक्नुहुन्छ र यसले कसरी अन्य पृष्ठहरूसँग दाँज्दछ। पृष्ठहरू समीक्षा गर्नुहोस् जुन उच्च लोडिंग समयहरू छन्, ताकि तपाईं अन्यलाई पनि त्यस्तै अनुकूलित गर्न कार्य गर्न सक्नुहुनेछ।
गति सुझावहरू - यस सेक्सनमा, व्यवहार रिपोर्ट प्रदान गर्दछ गुगलबाट उपयोगी सल्लाह अनुकूलन विकल्पहरूको बारेमा तपाइँसँग केहि साइट पृष्ठहरूको लागि। पृष्ठहरूमा कुनै पनि मुद्दा फिक्स गर्न सुरू गर्नुहोस् जुन अन्य पृष्ठहरूमा जानु भन्दा पहिले धेरै यातायात प्राप्त गर्दछ। तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ गुगल पृष्ठ गति उपकरण केहि पृष्ठहरू बढाउने सिफारिशहरू पहिचान गर्न।
[बक्स प्रकार = "नोट" align = "aligncenter" वर्ग = "" चौड़ाई = "% ०%"]सस्ता: पृष्ठ गति प्रमुख खोज ईन्जिन रैंकिंग कारक हो। ढिलाइको प्रत्येक एक सेकेन्ड%% कम रूपान्तरणमा जान्छ। फिक्सिंग लोड मुद्दाहरूको सवालहरूले तपाईंको कुराकानीहरू बढाउन र परित्याग दर कम गर्न सक्दछ। [/ बक्स]
प्रयोगकर्ताको समय - प्रयोगकर्ता समय रिपोर्टको साथ तपाईलाई पृष्ठमा विशिष्ट तत्वहरूको लोडिंग गति मापन गर्न बहुमूल्य मौका दिइन्छ। तपाईं पनि निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ कि यसले प्रयोगकर्ता अनुभवलाई असर गर्छ वा गर्दैन।
यो गुगल एनालिटिक्स व्यवहार रिपोर्टको अद्भुत अंश हो जहाँ तपाईं आफ्नो खोज बक्समा अन्तरदृष्टि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको खोज बाकस कती राम्रो प्रयोग भएको छ र कुन प्रश्नहरू प्रयोगकर्ताहरूले टाइप गरिरहेका छन्। तर, रिपोर्ट प्रयोग गर्नु अघि तपाईंले साइट खोजी सेटिंग्समा "साइट खोजी ट्र्याकिंग" बटन सक्षम गर्न आवश्यक पर्दछ। त्यो शीर्ष नेभिगेसनको प्रशासन भाग अन्तर्गत फेला पार्न सकिन्छ। ट्र्याकिंग चलाउनको लागि तपाईले तलको क्वेरी प्यारामिटर तलको छविमा देखाईएको छ।
साइट खोज सिंहावलोकन - साइट खोजी अवलोकनको सहायताले, तपाईले खोजी सर्तहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुने भ्रमणकर्ताहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यी व्यवहार रिपोर्टले विभिन्न मेट्रिक्स प्रदर्शन गर्दछ, जस्तै खोज एक्जिटहरू, खोजी पछाडि समय, र औसत खोजी गहराई। यसले आधारभूत रूपमा प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको साइटको खोजी बाकसमा खोजी गरेको सबै कुराको विश्लेषण गर्दछ।
उपयोग - प्रयोग सेक्सनले तपाईंलाई कसरी खोजी बाकसले प्रयोगकर्ताको अनुभवलाई असर गर्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ। तपाईं कसरी खोज बाकसले तपाईंको बाउन्स रेट, रूपान्तरणहरू, र औसत सत्र अवधिमा प्रभाव पार्छ भनेर जान्न सक्नुहुनेछ।
[बक्स प्रकार = "नोट" align = "aligncenter" वर्ग = "" चौड़ाई = "% ०%"]सस्ता: यदि तपाईले खोज बाकसको प्रयोग धेरै नै देख्नुभयो भने, यो सँधै सिफारिस गरिन्छ कि तपाईले खोज बाकसलाई सibility्लग्नतालाई बढावा दिईएको दृश्यताको सबै भन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा राख्नुहोस्। [/ बक्स]
सर्त सर्तहरू - खोजी सर्त रिपोर्टले तपाइँको साइटको खोजी बाकसमा कुन कुञ्जी शव्दहरू आगंतुक गर्दछ देखाउँदछ। यसले खोजको कुल संख्या र खोज निकासहरूको मात्रा पनि प्रदर्शन गर्दछ।
पृष्ठ - यहाँ तपाईले सर्त सर्त रिपोर्टमा उस्तै मेट्रिक्स प्राप्त गर्नुहुनेछ, तर त्यहाँ खास पृष्ठहरूको अध्ययन गर्न ध्यान केन्द्रित गरिएको छ जहाँबाट खोजशब्द खोजीहरू आउँदछन्।
व्यवहार रिपोर्ट को घटनाक्रम सेक्सन अन्तर्गत, तपाईं विशिष्ट वेब कुराकानी ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ फाईल डाउनलोड, भिडियो प्ले, र बाह्य लिंक क्लिक सहित। घटना ट्र्याकिंग धेरै लामो, बुझ्न गाह्रो प्रक्रिया हो, तर गुगल विकासकर्ता गाईडहरू यसलाई सेट अप गर्न सिक्न सजिलो बनाएको छ र बाट सिक्नुहोस्।
घटना अवलोकन - घटना अवलोकन रिपोर्ट मूलतया आगन्तुकहरूको कुराकानीको रूपरेखा हो। यसले घटनाहरूको संख्या र तिनीहरूको मान देखाउँदछ। तपाईले भविष्यमा कुन घटनाहरूमा ध्यान दिन चाहानुहुन्छ प्रदर्शनको सुधार गर्न सक्नुहुनेछ।
शीर्ष घटनाहरू - यहाँ तपाईले अवलोकन गर्नु हुन्छ कि कुन घटनासँग सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता कुराकानी हुन्छ। शीर्ष घटनाक्रम थाहा पाउँदा तपाईको पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईको आगन्तुकहरुमा अधिक रुचि छ र कुन अन्य व्यक्तिले धेरै ध्यान पाउँदैनन्।
पृष्ठ - पृष्ठ रिपोर्टले तपाईंलाई शीर्ष पृष्ठहरूमा भ्रमण गर्ने अन्तरक्रियाको सर्वाधिक संख्याको साथ अन्तरदृष्टि दिन्छ।
घटनाहरू प्रवाह - घटना फ्लो सेक्सनमा, तपाईं घटना घटनासँग अन्तर्क्रिया लिनका लागि लिने बाटो ट्रयाक गर्न सक्नुहुन्छ।
पहिले, प्रकाशक सेक्सनको नाम एड्सेन्स थियो। तपाईं पछि यो डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको गुगल एनालाइटिक्स र एड्सेन्स खाता जोड्दै। त्यसो गर्नाले तपाईंलाई उहीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण व्यवहार रिपोर्टहरू हेर्न अनुमति दिनेछ।
प्रकाशक सिंहावलोकन - प्रकाशक सिंहावलोकन अंश गुगल Adsense बाट उत्पन्न कुल तपाईंको कुल राजस्व निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं एक क्लिक सुविधा को लागी तपाईंको क्लिक-थ्रू दरहरू र समग्र प्रभावहरू पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले तपाईंलाई तपाईंको आयहरू हेर्न Adsense पृष्ठहरू र Google विश्लेषकहरू आवाश्यक पर्दैन।
प्रकाशक पृष्ठहरू - प्रकाशक पृष्ठ रिपोर्ट अन्तर्गत, तपाईं पृष्ठहरू अधिकतम राजस्व डलर उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। यी पृष्ठहरूले किन अन्यहरू भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दैछ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, ताकि तपाईं अन्य पृष्ठहरू अभाव भएको सुधार गर्न उही रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रकाशक रेफररहरू - यहाँ तपाईं सन्दर्भ URL हरू पाउन सक्नुहुन्छ जसले तपाईंको AdSense विज्ञापनमा क्लिक गर्न आगंतुकहरूलाई ड्राइभ गर्दछ। प्रकाशक रेफरर रिपोर्ट समीक्षा गर्दा तपाईंलाई अधिकतम विकासको लागि सही यातायात स्रोतहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिन्छ।
व्यवहार रिपोर्टको प्रयोग सेक्सनले तपाईंलाई साधारण आचरण गर्न सक्षम गर्दछ एक / बी परीक्षण। तसर्थ, तपाईं अवतरण पृष्ठ परिवर्तनहरू देख्नुहुनेछ जुन सब भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ। यी परीक्षणहरूले तपाईंलाई तपाईंको साइटलाई विशेष रूपान्तरण लक्ष्यहरू पूरा गर्न अनुकूलित गर्न सहयोग गर्दछ।
यो इन-पृष्ठ एनालिटिक्स ट्याबले तपाईंलाई गुगल विश्लेषक डाटाको साथ तपाईंको साइटमा पृष्ठहरू हेर्न अनुमति दिन्छ। कुन क्षेत्रलाई सब भन्दा ध्यान दिइन्छ र राम्रो रूपान्तरणमा सहयोग पुर्‍याउन लिंकहरू थप्न सक्नुहुन्छ। पहिले, तपाईं स्थापना गर्नु पर्छ गुगल क्रोम पृष्ठ एनालिटिक्स विस्तार, जसले तपाईंलाई प्रत्येक पृष्ठ लिंकमा क्लिकको साथ वास्तविक-समय डाटा हेर्न दिन्छ।
अब, तपाईले देख्नुहुन्छ कि कसरी गुगलले तपाईको साइट प्रदर्शनमा एक नि: शुल्क, विस्तृत डेटा दिन्छ जुन तपाईले एक पटक उपेक्षा गर्नुभयो। गुगल एनालिटिक्स व्यवहार रिपोर्टले तपाईंको साइटमा आगन्तुकहरूले कसरी कुराकानी र मद्दत गर्दछन् सम्बन्धित गहन जानकारी प्रकट गर्दछ। तपाइँ कुन पृष्ठहरू र घटनाहरूले सब भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ र कुन सुधारको आवश्यकता छ भनेर एक लुकेको झलक पाउनुहोस्। केवल स्मार्ट चाल यो व्यवहार रिपोर्ट को फाइदा लिन आफ्नो वेबसाइट अनुकूलन र आफ्नो रूपान्तरण सुधार हुनेछ।
टैग: व्यवहार रिपोर्टGoogle विश्लेषणगुगल विश्लेषक व्यवहार रिपोर्टिंगगुगल विश्लेषक व्यवहार रिपोर्ट
तपाईंको बिक्री प्रतिनिधिहरू 'डायल गर्ने गतिविधिहरू प्रत्यक्ष कुराकानीको साथ बदल्नुहोस्